Chikumi 1, 2018 arun
Kraken Daily Market Mushumo 01.06.2018
$128M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Huobi kuti vomurova crypto ETF
Cryptocurrency wokutengesera kuchikuva Huobi ari nezvekutanga munhu crypto-yakavakirwa Exchange-mhindu Fund (ETF), imwe mari nzira kuti achabvumira chitoro vanoita kuwana nezvemidzimu tswanda zvinhu panzvimbo chete panguva.
The inivhesitimendi music, akadana HB10, zvino akazarukira magazini uye chete anobvuma kutenga vachishandisa cryptocurrencies, pachinzvimbo Fiat mari.
The kambani mberi akawedzera kuti sezvo chigadzirwa kuchavawo dziripo zvechechi vanoita, zvayaigona angangoita “muderedze zvechechi kupinda uye mbudo” pamusoro cryptocurrencies kuroora.
GMO anotangazve Mobile Anwendung kuti anorega gamers kuwana Bitcoin
Japanese Michina makasimba GMO Internet Group kwakasimbiswa idzva Mobile Anwendung kuti anorega vanoshandisa mari Bitcoin nokungoita nokutamba mitambo.
The Anwendung itsva - inonzi CryptoChips - vachange pakutanga kuti revatema aine-chaicho nguva miganhu mutambo hondo uyewo kugadzirwa GMO akadana “Whimsical War.”
The Tech Zirume akati tariro iri kukurudzira veruzhinji kuti vazivane cryptocurrencies nomukombiyuta Anwendung itsva, sezvo vanoshandisa vanofanira kushandisa pachavo digitaalinen wallets dzavo kugamuchira uye kushandisa Bitcoin.
Singapore entrepreneur akatenga marezinesi Japanese crypto mukutsinhana $ 67M
Eric Cheng, inobudirira Real Estate entrepreneur, awana munhu 100% rokutambudzikira Japanese FSA-marezinesi FX Trade Financial Co., Ltd, imwe FX wokutengesera papuratifomu, uyewo BitTrade, munhu marezinesi cryptocurrency zvokutengeserana pachikuva makuru Japan.
Iye anoda kuti rinopikisa kukwira ari kutengesa pachikuva kupinda pakukura Japan & vanokwanisa wedzera mabasa munyika yose.
Eric Cheng anova nomutorwa wokutanga dzavo 100% danda mune Japanese FSA-marezinesi cryptocurrency wokutengesera papuratifomu
Square kuwedzera pakukosha nokuramba $ 8B kubva achiwedzera Bitcoin kutengesa rapera
Anogoverana pamusoro Square Inc. kunge kupfuura nekaviri ukoshi mumakore gore.
unganidza muripo zvakasimba kwakaita yakadirana ne kusvika 50%, achiwedzera pamusoro $8 bhiriyoni pamusika ukoshi, sezvo vaikungurutsa kubva Bitcoin wokuita zvemusika November kuti vatengi ayo Cash App, iyo anoita kuti vanoishandisa akatamisa mari kushamwari uye mhuri.
IMF mukuru anokurudzira nechepakati mabhanga kukwikwidzana cryptocurrencies
A chepamusoro panguva International Monetary Fund (IMF) ari kukurudzira nechepakati mabhanga kukudziridza "nani" Fiat mari kuti varambe utungamiri kumhanya pamusoro cryptocurrency.
IMF Mutevedzeri Director Dong Anoita mhosva kuti "crypto angapedzisira rimwe zuva kuderedza kudiwa Central Bank mari" uye kuti hurumende nemasangano kuita zvakawanda kuti kutendera kuti zviitike. Nemamwe mashoko, kuti "adzivise kukwikwidzana kumanikidzwa crypto angapedzisira nesimba pamusoro Fiat mari,"Nechepakati mabhanga vanofanira kugamuchira vamwe chinoumba pfungwa kutyaira digitaalinen zvinhu.